A Tarisa Mhengo Mhuri Family
Snapshot yeManson Family
Vakanaka uye Vasina Maturo Charles Manson Mhuri Mhuri
Mhosva dzaCharles Manson uye nhengo dzeManson Family dzakashamisa vateveri vezvemhosva kwemakore anodarika makumi mashanu. Kuuraya uku kwaive kwakanyanyisa uye kwakatyisa sezvakange kune zvimwe zvekuuraya kwakakura muma1970.
Asi Manson inouraya inomira pachena, zvose nekuda kwechikonzero chinoshamisa chaCharles Manson uye kune mifananidzo iyi kuurayiwa kunofungidzira mumaziso evanhu vanopindwa muropa nezvinodhaka vachiedza kubira pfungwa uye kuputsa tsika dzehutano dzevaduku vakuru vane maruva mu vhudzi ravo, vachiedza kuwana chinangwa muupenyu hwavo.
Achikurudzirwa nezvenguva, Charles Manson akakurira kuva mudzidzisi mukuru. Kuvhiringidzika, hallucinogenic zvinodhaka, mamiriro ekupandukira kwakasimba, zvinotarisirwa zvisingatarisirwi uye kutsvaga kwe "rusununguko" rutsva rwakagamuchirwa nechikamu chezera rechi60. Manson akaiswa muchikwata ichi, sezvavakange vakaungana muchikamu cheHaight-Ashbury cheSan Francisco, uye vakatora avo vasina simba kupinda mumapoka ake.
Zvichida zvakapfuura nepfungwa dzevamwe chizvarwa ichocho, iye zvino vachitarisa mutana muhupenyu, kuti vakakwanisa kudzivisa Manson, neavo vakaita saiye, shure kweizvozvo nesimba guru reruza. Vamwe vakagara mumapaki ezvo, vakateerera mimhanzi imwechete uye vakasvuta dope rakafanana nevakawanda vemhuri yeManson, asi vakakwanisa kudzivisa kutaridzirwa. Uyezve, pane avo vakatsvaga muchikwata chake asi vakakwanisa kupukunyuka vasati vaona kukuvadza kusingaenzaniswi. Vaya vaiva avo vaifara zvechokwadi.
Zvadaro paiva nevasina maturo - chikamu chiduku chakanga chisina kupukunyuka uye munguva inoshandiswa uye kushungurudzwa kusvika pakuti avo vaimbove vasati vasipo. Chokwadi chavo chete chakanga chiri icho Manson aitaura. Vakanamatira tsika dzavo kuti vararame rimwe zuva nemutungamiri wavo akasarudzwa.
Sezvaunofamba nemuManson Family Photo Album uchaona mienzaniso yevamwe vane nhanho avo vakapukunyuka kubva mumhuri yeManson mhuri vasati vapona upenyu hwavo husingaperi, vamwe vakafa vasati vatiza, uye avo vaigara vakawanda vavo anogara mujeri semhaka yezviito zvavo pasi peManson spell.
Nhengo dzemhuri dzeManson Family's Key
Charles Manson : Charles Manson akanga ari wekare, mbavha uye mupfu uyo ​​akarova mumigwagwa yeHaight-Ashbury uye akava mutungamiriri wechitendero weManson Family. Pasi pekutungamirirwa kwaManson, nhengo dzemhuri dzakazowanikwa dzakava nemhosva yezvakazozivikanwa sekutongwa kweTate uye LaBianco.
Charles Watson (Tex) : Charles Watson aiva mudzidzi wekudzidzira chikoro chepamusoro-soro uye mutambi akanaka uye akawana mukurumbira senhare yemunharaunda; ipapo akasangana naCharles Manson.
Leslie Van Houten : Van Houten aiva musikana anozivikanwa wechidiki uyo akambovhota kaviri semudzimai wekumusha kwake kuchikoro chesekondari. Asi iye akaitawo zvisarudzo zvakaipa, izvo zvakazopedzisira zvaita kuti ave akavharwa mushure mejeri kwehupenyu hwake hwose.
Patricia Krenwinkel (Katie) : Patricia Krenwinkel akatambura nekuzviremekedza munguva yevechiri kuyaruka, akambove ari pamusoro pehutatu uye kutambura kwehuwandu hwemvere dzomuviri. Akapedza vana vake vachiri kuyaruka vasinganzwi uye vasingafariri. Akanga ari nyore kutora kwaCharles Manson.
Susan Atkins (Sadie) : Kusiyana nevakawanda vevasikana vaManson, Atkins akakurumidza kupinda munyika yeupombwe uye aiva mutengesi asina mutambo uye mutengesi wezvinodhaka asati abatanidzwa nemhuri yeManson.
Lynette Fromme (Squeaky) : Dhimei yaiva nhengo yeAtenean Honor Society neVasikana Athletic Club, asi hupenyu hwemhuri yake hwakanga husina basa, uye akabva kumba pamba achienda kuchikoro. Haana kumbozviita.
Linda Kasabian : Kasabian akagadzira "hippie" mweya wezviitiko - rudo rusina rugare nerunyararo. Akazoziva kuti mhuri yeManson yakanga iri yakasiyana, asi kwete vasati vatungamirirwa mukati mezvakaipa zvavo.
Hazvina chokwadi kuti chero mhuri yemhuri inowanikwa mhaka yekubatana kwavo muTate uye LaBianca kuuraya kuchasunungurwa . Zviito zvavo zvakanga zvakashata kwazvo, kunyange nemazuva ano. Avo avo vachiri vapenyu vangangofa mujeri.
The Aryan Warriors
Nhoroondo yeUurayi Wevana Mwana Susan Smith
Mufananidzo weGall Tattoos
Nhoroondo yeMichael Skakel - Chikamu Chekutanga
The Robin Row Case: Yokupedzisira Kusarura kwaamai
Nhoroondo uye Mhosva dzeTeresa Lewis
Motokari Front Forks, Kuchinja Zvisimbiso
250 Misoro yeChechi Inofanirwa
'Paka neZvaraidzo' Mwaka 3 Chikamu
Nhoroondo yeMutambo Wemauto Utility
Mufananidzo Wakanakisisa Oscar Vanowanikwa muma1960
Mashandisiro Aungaita maVheti echiItaly 'Sapere' uye 'Conoscere'
Mutungamiri weMutangisi weMambo weAztec weCentral Mexico
Florida International University (FIU) Kubvuma
Rosetta Anowedzera-Aswedera Pedyo neCetet
Zvakakosha Kuziva Nguva Yokutora Muti Wako Krisimasi
Bates College Admissions
Samuro Nyaya Tsamba Kubva Mudzidzisi
Reactive Rein Bowling Balls
Ping-Pong Points Paunenge Uchishumira
Nyeredzi yeSpain Spangled Banner Inosvika Mutemo Wemutemo
Nhoroondo Pfupi Yokunyora
Kutanga Kunyora muChikoro Chekutanga
Nguva Yenguva Dzakakurumbira Classical Music Playlist
¿Is posible comprar la tarjeta de residencia permanent in EE.UU?
Willow Oak - A Favorite Wildlife Food uye Landscape Tree
Tsanangudzo uye Mienzaniso yeDiazeugma
China 23 Provinces
Consonant Sounds uye Tsamba muChirungu